News – Page 17 – Maskandi Media
Amabunjwa 2019 – Uber
Umculi kaMaskandi onama album amabili akawakhipha njalo ngonyaka kulindeleke ukuthi enze lezo akadume ngazo uma esededela icwecwe lakhe elisha. Lo mculi uthi uzokwenza okukhuu kakhulu kule album esihloko sithi uber. “Ngifisa
ukwazisa abathandi bomculo wami ukuthi kulonyaka ngizokwenza engidume ngazo yebo but ngithande ukwedlulela kakhulu. Njengoba uzwa lesi sihloko
yebo sihleli ezwini lezihloko eziningi esengike ngaba nazo ngaphans kwale album yamabunjwa. Ngizodedela leli cwecwe ngaphambi kokuthi ngiyojabulisa abantu emcimbini omkhulu Impucuzeko.
Ngazisa bonke abathandi bomculo weMfezemnyama ekhwifa isakude ukuthi noma kanjani izophuma mhlaka 29 June 2019. Bayazike bona ukuthi lo music omnandi kangaka ufakelwa kanjani i-order ngoba abaqali ukuthenga ngendlela encomekayo”.
Kulindeleke ukuthi kubenendumezulu yomcimbi obizwa nge-world cup kaMaskandi ozobe ubanjelwe enkundleni yezemidlalo esethekwini. Lo mcimbi waminyaka yonke uzobe usezingeni lomhlaba kulokhu njengoba uzongena okokuqala kule nkundla ngaphakathi. “Ngizodlulisa okukhulu ukubonga kubaphathi beMpucuzeko kanye nobaba uMsholozi okunguyena owamemezela ukuthi lo mcimbi uzongena enkundleni”.
“Bese nginxusa kozakwethu ukuthi sizimisele senze lo mcimbi ubesezingeni eliwufanele. Njengoba bebaningi nje abaculi abazodlala live, lokho kusho ukuthi kumele umculi azilungiselele ngokukhulu ukuzimisela ngoba baningi abaculi okumele bedlale laphana”. Kubeka Imfezi.
Abathandi bomculo abawuvali umlomo ngendlela asebejahe ngakhona ukuyizwa le ngoma. “Mina njengomuntu ojwayele ukuzibizela yona vele imoto yodumo uma ngibuya ukuyozidlela amponjwana, angingabazi ukuthi ngizohamba ngiyidlala le ngoma phakathi esihlalweni esingemumva. Sengithi nje akasheshe afike umhlaka 29 ngizizwele ngeyami indlebe ngoba izobamnandi”. Kusho uKwazi Khoza.
“Cha nami ngithi angisike elijikayo njengomlandeli wokuqina weMfezi. Phela uma sekuyiwa kule album yamabunjwa, Imfezi ivele ikhwife okokugcina. Yingakho sisho sithi asisakhoni nokulinda ngoba phela zifike zedula izinsuku ebesilindele ngazo but sisalindele namanje”. Kusho uMadodazingxemu Mbatha.